ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ - နယ်ခြားမရှိ 24/7 ဆက်သွယ်ရေး
ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ဂိမ်းသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း 197 နိုင်ငံမှ မတူညီသောလူမှုရေးအဆင့်အတန်းရှိသော မိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေးများနှင့် အလွယ်တကူ စကားပြောနိုင်သည့်အခမဲ့virtual space တစ်ခုဖြစ်သည်။စကားဝိုင်းကိုရှာရန်၊ သင့်သာယာသောအိမ်မှ ထွက်ခွာရန်မလိုအပ်ပါ၊ အင်တာနက်သုံးရန် လုံလောက်ပါသည်။
Chatrouletteဝဘ်ဆိုဒ် သည်ပထဝီဝင် သို့မဟုတ် အသက်အပိုင်းအခြားများမပါဘဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုအတွက် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ မူလသဘောတရားကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည်။သင်သည် တစ်နေ့တာ၏အချိန်တိုင်းတွင် စကားဝိုင်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး 100% ဖျော်ဖြေမှုပေးသည့်လူကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။
အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အဆက်အသွယ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျား ရှိနေပါသည်။၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် များပြားလှသော ဧည့်သည်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ဂိမ်းကို ရက်ရှည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ အွန်လိုင်းမှာလုပ်ဆောင်ပြီး လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စနစ်သည် အသုံးပြုသူ၏ ဗီဒီယိုကို ပြသပြီး ဝဘ်ကင်မရာကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
စကားဝိုင်းကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်သည်၊ ဤသည်မှာ "ရုရှားကစားတဲ့" အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုတိုက်ရိုက်တည်ဆောက်ပြီးနောက်ကျပန်းနံပါတ်များနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ဤနည်းပညာသည် ဆာဗာများကို ကြားခံများအဖြစ် အသုံးမပြုပါ။ဒီအတွက်ကြောင့်၊ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ တည်နေရာကို ရှာတွေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဝန်ဆောင်မှုသည် ကျပန်းရှာဖွေမှုကို အသုံးပြုကာ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန် ဒရိုက်ဘာများ မလိုအပ်ပါ။
စနစ်၏နောက်ထပ် "အပေါင်း" တစ်ခုမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ သင်သည် "e-mail" ကို ညွှန်ပြရန် မလိုအပ်ဘဲ သို့မဟုတ် "nickname" ဖြင့် ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို2ကလစ်နှိပ်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ function ခလုတ်များ။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ ကစားပုံကို ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။
သူငယ်ချင်းများ/အသိအကျွမ်းများကို ရှာဖွေပါ။အလုပ်၊ စာကျက်၊ ရှက်တတ်တာက မင်းကို သူငယ်ချင်းအစစ်ရှာဖို့ ခွင့်မပြုဘူးလား။ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ဂိမ်း သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲမိန်းကလေးများ သို့မဟုတ် ယောက်ျားလေးများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။သူငယ်ချင်းရှာတာ ဒီရွေးချယ်မှုက ပိုထိရောက်တာကြောင့်ပါ။လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကျောင်းသားအချင်းချင်း သို့မဟုတ် အသိမိတ်ဆွေများကိုသာ စက်ဝိုင်းကို ကန့်သတ်မထားဘဲ သင့်ရှေ့မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော virtual ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရှိနေပါသည်။အမည်မသိမုဒ်တွင်၊ “ဖွင့်” ရန်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရှက်ကြောက်ခြင်းကို ကျော်လွှားပြီး သင့်အား အမှန်တကယ် နားလည်ပေးသူကို ရှာဖွေရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
မင်းရဲ့ "soulmate" ကိုရှာပါ။ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ဂိမ်းက သင့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဒါမှမဟုတ် ရဲရင့်တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ရင်းနှီးစေရုံသာမကဘဲအကန့်အသတ်မရှိ စကားစမြည်ပြောဆိုနေချိန်မှာလည်း သူတို့ကို မှတ်မိစေနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အော့ဖ်လိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုမတိုင်မီ သင်ရွေးချယ်ထားသော "A" မှ "Z" ကို လေ့လာရန် ကောင်းသောအခွင့်အရေး။ခေတ်သစ်ဘဝ၏ ရစ်သမ်တွင်၊ missus ကိုရှာဖွေရန် virtual ချဉ်းကပ်မှုသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာထက် ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။အပိုဆုကြေး - အစွဲအလမ်းကြီးသော ချစ်သူ/ကောင်မလေးအား ထာဝရနှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်းဖြင့် “ရက်စွဲ” ကို အချိန်မရွေး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ သိအောင်လုပ်ပါ။Video chat သည် ဆက်သွယ်ရေး၏ ပထဝီဝင်အနေအထားအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် နေထိုင်သူများနှင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအခမဲ့စကားပြော နိုင်သည် ။ထို့အပြင်၊ ဤသည်မှာ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို သင်ယူရန် သို့မဟုတ် သင်ဖတ်စာအုပ်များ သို့မဟုတ် အင်တာနက်ကိုမသုံးဘဲ မိခင်ဘာသာစကားကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြု၍ သင်၏စကားပြောစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်နှင့်မရင်းနှီးသောနိုင်ငံ၌တွေ့ဆုံရန်နှင့်အမှတ်တရလေ့လာရေးခရီးများပြုလုပ်ရန်လူတစ်ဦးရှိကြောင်းသိလျက်သင်ခရီးသွားနိုင်သည်။
Chatrouletteသည် ကာလရှည် သို့မဟုတ် ရေတိုအသိအကျွမ်းများ၊ ယောက်ျားလေးများ သို့မဟုတ်မိန်းကလေးများနှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပရောပရည်လုပ်ခြင်းအတွက် လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် စကားပြောရန် လိုအပ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကို ရယူသည့်အခါတွင်လည်း ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ဆွေမျိုးထက် သူစိမ်းတစ်ယောက်၏အကူအညီဖြင့် သိမ်မွေ့သောအခြေအနေတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရန် မကြာခဏ လွယ်ကူသည်။အမည်ဝှက်ထားခြင်းသည် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲ "ပူပြင်းသော" ခေါင်းစဉ်ကို သင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်ဟု အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ဗီဒီယိုချတ်ကို ဘယ်လိုစရမလဲ။
ဝဘ်ကင်မရာကို သင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် PC၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများ၊
ယောက်ျားလေးတွေ၊မိန်းကလေးတွေနဲ့ အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုစကားပြောဖို့ အားလပ် ချိန်။
အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခု။"ဤနေရာတွင် မက်ဆေ့ချ်ရေးရန်" အကွက်ကို အသုံးပြု၍ ကင်မရာမပါဘဲ စကားပြောနိုင်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော virtual dating တွင်မပါဝင်သေးသော စတင်သူများအတွက်ပင် ဝန်ဆောင်မှုဆက်တင်များသည် အလိုလိုသိသာပါသည်။စနစ်သည် 2-3 စက္ကန့်အတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော ဆော့ကစားမှုအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
ဧည့်သည်ပြီးနောက်အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချတ် သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲစတင်ပါမည် -
Chatrouletteဝဘ်ဆိုဒ် သို့ သွားပါ။
"Enable webcam" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
"Enable flash player" တောင်းဆိုချက်ကို အပြုသဘောဖြင့် ဖြေကြားပါမည်။
ဆက်သွယ်လိုသူများ၏ ထုတ်လွှင့်မှု စတင်သည်။၎င်းတို့ထဲမှ ပထမတွင် ရပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် “နောက်တစ်ခု” ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် “လှန်ကြည့်” နိုင်သည်။ထိုသို့သောပုံစံသည် သင့်အား မနှစ်သက်သော စကားပြောဆိုသူနှင့် အသိမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန် မလိုအပ်ပါ၊ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် သင့်အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။
Chatroulette ဝန်ဆောင်မှုက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ။
ခင်မင်ရင်းနှီးချင်သော်လည်း "အသက်ရှင်ခြင်း" လုပ်ဖို့ ရှက်/ကြောက်၊
အလုပ်များလွန်း၍ သူငယ်ချင်း/ချစ်ရသူကို ရှာရန် အားလပ်ချိန်မရှိ၊
ခေတ်မီပြီး ထူးခြားသော ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းကို နှစ်သက်သည်။
အခမဲ့ "မိနစ်" သုံးစွဲရန် အသေးအဖွဲမဟုတ်သော နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေပါသည်။
အသက်အရွယ်မရွေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ဘာသာတရားများနှင့် ဘဝအမြင်များ အတွက်လည်း ပါဝင်သည်။အပြင်ထွက်ရန် "မျက်နှာထိန်းချုပ်မှု" သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေဝတ်စားဆင်ယင်မှု မရှိပါ။သင်သည် ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ချတ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Chatroulette ဝန်ဆောင်မှု၏ အားသာချက်များ
ဤစကားပြောဆိုမှုပုံစံကို အသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အဆင်ပြေပြီး ဘေးကင်းပါသည်။ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချတ်၏ အဓိကအားသာချက်များ မှာအွန်လိုင်းမုဒ် ဖြစ်ပြီး၊အခမဲ့အသုံးပြုနိုင် ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူဦးရေ အကန့်အသတ်မရှိ၊မိန်းကလေးသို့မဟုတ် ယောက်ျားလေးများ နှင့်စကားပြောနိုင်သည် ။
100% "လျှို့ဝှက်ချက်" ။ဤနေရာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိပါ၊ မူလတန်းကျောင်းမှ အမည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ် ရေးပြီးပင် သင့်ထံမှ အချက်အလက်များ မလိုအပ်ပါ။
ဆက်သွယ်ရေး 24/7 ။အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် စနေ၊ အလုပ်ချိန် သို့မဟုတ် အားလပ်ရက်များ မခွဲခြားဘဲ ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ။
အကန့်အသတ်မရှိ ချိန်းတွေ့ခြင်း။အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချတ်ကစား တဲ့အတွက်၊ ဧည့်သည်တွေရဲ့ကျား၊မ၊
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။အထူးဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ၊ အရာအားလုံးသည် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုမုဒ်တွင် "တိုက်ရိုက်" ဖြစ်သွားပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမြန်ရွေးချယ်ခြင်း။စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်စခရင်ပေါ်တွင် ချတ်လုပ်လိုသော လူသစ်များကို ပြသရန် စနစ် အယ်လဂိုရီသမ်ကို စနစ်ထည့်သွင်းထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် ခရီးသွားခြင်းအတွက် အချိန်အကြာကြီး ငွေစုရန် မလိုအပ်သော၊ အလုပ် သို့မဟုတ် စာကျက်ချိန်ကို ဖြတ်တောက်ရန် လေ့လာမှုအတွက် အသုံးပြုသူသည် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ဖွင့်ပေးသည်။ဤနေရာနှင့် ယခုတွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စကားပြောနိုင်သည်။
အသိအကျွမ်းများ၏ ကောင်းကင်ယံနှင့် ပထဝီဝင်ကို ချဲ့ထွင်ပါ။
မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှု တိုးမြင့်လာပြီး ဆက်သွယ်ရေးတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖယ်ရှားပါ။
မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆို ဆွေးနွေးမှုများအတွက် "ပုံစံမျိုးစုံ" အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများကို ရှာပါ။
အချစ်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက် လူတစ်ဦးကို သင် "စောင့်ရှောက်" နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ အားလပ်ချိန်များကို အကျိုးရှိ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၊ အထူးအဆန်းနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများဖြင့် ဖြုန်းပါ။
မည်သည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမဆိုယောက်ျားလေးများ သို့မဟုတ်မိန်းကလေးများနှင့် ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ ကစားပွဲကို 100%အခမဲ့ဖြစ်ပြီးမလိုအပ်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲယခု ပဲစတင် လိုက်ပါ။
Chatroulette ဆိုတာဘာလဲ။အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀း၄၁
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ Roulette chats ဟုခေါ်သော အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။၎င်းသည် အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း chat Roulette နှင့် ပုံမှန်ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုဒ်ကြား ခြားနားချက်မှာ ဤနေရာတွင် လူတစ်ဦးသည် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူကို မရွေးဘဲဖြစ်သည်။စနစ်ကိုယ်တိုင်က ၎င်း၏အသုံးပြုသူနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော အယ်လဂိုရီသမ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသူကို ကျပန်းရွေးချယ်သည်။အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်က အနာဂတ်စကားဝိုင်း၏ လိုချင်သော လိင်နှင့် အသက်ကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အများသူငှာ ဗီဒီယိုချတ်များလည်း ရှိပါသည်။ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်ထုတ်လွှင့်မှုကို http://rt.ruletka-888.com/ ဆိုက်တွင် လူတိုင်းရနိုင်သည်။ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကွဲပြားခြားနားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ရွေးချယ်မှု အများအပြားရှိသည်။လောလောဆယ်တွင်၊ 1000 ကျော်သောသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပျော်ရွှင်မည့် site တွင်စာရင်းသွင်းထားသည်။အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက်၊ ပုံမှန်စကားပြောခြင်းအပြင်၊ အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုသူများသည် အချင်းချင်းမြင်နိုင်စေရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးပိုမိုသွက်လက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ဗီဒီယိုချတ်ကိုလည်း ဖန်တီးထားပါသည်။
ဆိုက်တွင် စာရင်းသွင်းပြီး သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပါ။
ဗီဒီယိုချတ်တစ်ခုကို စတင်ပြီး သင့်နှင့် စကားပြောရန်အတွက် စကားဝိုင်းကို ရွေးချယ်ရန် စနစ်အား စောင့်ပါ။
သင်နှစ်သက်သလောက် ချတ်လုပ်ကာ အခြားသူတစ်ဦးနှင့် စကားပြောလိုပါက "နောက်တစ်ခု" ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် စကားဝိုင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသည် အခြားပါတနာကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။၎င်းကို အကြိမ်ရေ အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။တခါတရံတွင် စကားအပြောအဆိုများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်း ဤသည်မှာ အလွန်ရှားပါသည်။
စာရင်းသွင်းပြီးနောက်ချက်ချင်း၊ အထူးမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။အက်ပလီကေးရှင်းကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင် လုပ်ဆောင်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး စမ်းသပ်ထားသောကြောင့် ဆိုက်၏ အွန်လိုင်းဗားရှင်းထက် ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ထို့အပြင်၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့်၊ သင်သည် ဖုန်းစခရင်ပေါ်တွင် စကားပြောဆိုသူများထံမှ တိုက်ရိုက်သတိပေးချက်များကို လက်ခံရရှိနိုင်သောကြောင့် သင်သည် အဆက်မပြတ်ချတ်လုပ်ကာ အပ်ဒိတ်များကို လိုက်နာရန် မလိုအပ်ပါ။
ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီးသော နိုင်ငံသားများအတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်ကို ချက်ချင်းသတိပြုသင့်သည်။ကျန်အရာများအတွက်၊ ၎င်းတွင် မလိုလားအပ်သော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။"အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ" ကဏ္ဍတွင် ၎င်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။အောင်မြင်သောဆက်သွယ်ရေး။
ချစ်လှစွာသောဧည့်သည်များ။ဝဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုသည် အားစိုက်ထုတ်မှု၊ အချိန်နှင့် အရင်းအမြစ်များစွာ လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်ကို နှစ်သက်ပြီး ၎င်းကို ဆက်လက်တည်ရှိစေလိုလျှင် သေးငယ်သောအလှူပုံစံဖြင့် သင်၏အလှူငွေကို လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။သင်သည် Sberbank ကတ်သို့ လှူဒါန်းနိုင်သည်- 4817760251202287 ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အကူအညီအတွက်မဆို ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!))
အကောင်းဆုံး Chatroulette အွန်လိုင်း
လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ စကားပြောရတာ ငြီးငွေ့နေသလား၊ ဒါပေမယ့် chatroulette ကို မစမ်းဖူးသေးဘူး။တိုက်ရိုက်ဝဘ်ကင်မရာများကို ကြည့်ရှုပြီး တကယ့်လူများနှင့် စကားပြောချင်ပါသလား။ဒါဆိုရင် ဒီအင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းကို သင် သဘောကျမှာ သေချာပါတယ်။
ဤသည်မှာ ဆူညံသောကုမ္ပဏီများအတွက် တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို နှစ်သက်သော မိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေးများအတွက် စံပြကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်၊ လက်တွေ့ဘဝတွင် သူစိမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်သူအများအပြားရှိသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်းတို့သည် ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုကို အလွန်နာကျင်စွာခံစားနေကြရပြီး ချက်တင်ကစားသော ဤအခြေအနေကို ပြုပြင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ဤဗီဒီယိုရင်းမြစ်ကို ပြင်ပမှကြည့်လျှင် ၎င်းကို ချတ်ကစားတဲ့ အကြောင်းရင်း (အလားတူအမည်များ- ချတ်ကစားတဲ့၊ ru ကစားတဲ့၊ ချက်တင်ကစားတဲ့ 18၊ ချတ်ကစားတဲ့၊ ချက်တင်ကစားတဲ့ ရုရှား) ကို သင်နားလည်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤအွန်လိုင်းအသိမိတ်ဆွေသည် ချက်တင်နှင့် နာမည်ကြီးကစားသည့်ဂိမ်း အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ဤပေါ့ပေါ့ပါးပါးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်း၏ အကျိုးစီးပွားတစ်ခုလုံးသည် ဗီဒီယိုချတ်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်၌သာ တည်ရှိသည်။ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အကြည့်ဖြင့် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံရပြီး ၎င်းကို မကြိုက်ပါက ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ အခြားသူစိမ်းတစ်ဦးထံ ဆက်သွားပါ။
ဤဗီဒီယိုချတ်သည် ဥရောပ (အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ စသည်)၊ အမေရိကန် (အမေရိက)၊ မက္ကဆီကို၊ တရုတ်နှင့် CIS နိုင်ငံ (ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ ဘီလာရု) တို့တွင် ရေပန်းစားလာသည် .ဒီလိုချက်တင်ကစားတဲ့ပုံစံက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြောင့် ဒါက အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။
ယနေ့ သန်းပေါင်းများစွာသော သုံးစွဲသူများသည် chatroulette စကားဝိုင်းများကို အကောင်းဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး ကိစ္စများစွာတွင် အဆင်ပြေဆုံးသော ဆက်သွယ်ရေးဖော်မတ်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအတွက် ခေတ်မီအင်တာနက်နည်းလမ်းများကို အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိလူများက အသုံးပြုခြင်းသည် လူမှုကွန်ရက်များအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်သေထူပါသည်။
Wirt ချတ်ကစားတဲ့ကစားနည်း - မိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေး 1000 သည် သင်နှင့် စကားပြောရန် စိတ်အားထက်သန်နေပါသည်။
လူတစ်ဦးသည် သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် စကားဝိုင်းကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရိုးသားပြီး လေးနက်သော ဆက်ဆံရေးအတွက် လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါ - ရုရှားမိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေးများ၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ချက်တင်ကစားရာတွင် လူတိုင်းက သစ္စာရှိသော သူငယ်ချင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။ ဘဝတစ်သက်တာ
လူတော်တော်များများက သူတို့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ စကားပြောဖို့ မတတ်နိုင်ဘဲ အလုပ်မှာ အများလက်ခံထားတဲ့ ပုံနဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိရမယ်။ဤအချက်များအားလုံးသည် မသိစိတ်ထဲတွင် စုပုံနေပြီး လူတစ်ဦးသည် အကြောက်တရားနှင့် ယေဘူယျနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း၏ ဓားစာခံဖြစ်လာသည်ဟူသောအချက်ကို ဦးတည်ကာ ကစားကွက်ကို ဤအခြေအနေမှ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းနီးပါးဟု ရှုမြင်နေချိန်တွင်၊
ဒါဆို ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ။အထီးကျန်မှုကို ပြေပျောက်အောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ရုံသာမက ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်နိုင်တဲ့သူကို ဘယ်မှာရှာရမလဲ။
ခေတ်မီအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၏ အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် chat roulette အသုံးပြုသူများအတွက် ငြင်းမရနိုင်သော အားသာချက် 5ခုကို မေ့ထားရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ရိုးရှင်းပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ချတ်ကစားတဲ့ ဆိုက်များနှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းများသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ရိုးရှင်းစွာ "စတင်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ နှင့်စနစ်သည်သင့်အတွက်အဖော်ကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
ကြုံသလို အသိမိတ်ဆွေများ။ဗီဒီယိုချတ်ရှိလူအချို့သည် ဤနည်းဖြင့် အတင်းအကြပ်လုပ်မည်ဟု ယုံကြည်ကာ ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းရန် ရှက်ရွံ့ကြသည်။ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူး။ဗီဒီယိုချတ်သို့ သင်ဝင်ရောက်ပါက၊ သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေနေပြီး ဆက်သွယ်ရန်သာမက၊ အံ့သြဖွယ်နားထောင်သူနှင့် အမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရန်လည်း လုံးလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေသော စခရင်၏အခြားတစ်ဖက်တွင် လူတစ်ဦးကို သင်တွေ့ရပါမည်။
တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူသည် စိတ်မဝင်စားကြောင်း သို့မဟုတ် မတော်တရော်ပြုမူပါက၊ ရှင်းလင်းချက် သို့မဟုတ် တောင်းပန်ခြင်းမရှိဘဲ၊ "နောက်တစ်ခု" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ သင်သည် နားထောင်သူအသစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးကို ဝဘ်ကင်မရာဖြင့် ကျင်းပသည်။ဤချတ်တွင် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းမပြုဘဲ၊ အသုံးပြုသူများသည် ဓာတ်ပုံအစစ်အစား လက်တွေ့နှင့်မကိုက်ညီသည့် အချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ရက်များတွင် စာပေးစာယူခြင်းထက် များစွာပိုမိုထိရောက်သည့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူကို ချက်ချင်းမြင်နိုင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဝဘ်ကင်မရာနှင့် သိကျွမ်းခြင်းသည် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။
အထီးကျန်ခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း။လူတိုင်းသည် နာကျင်သောပြဿနာများအကြောင်း ဆွေမျိုးများ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြနိုင်သည်မဟုတ်။ချက်တင်ကစားတဲ့ stream မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တစ်ယောက်နဲ့ သင့်အတွေးအမြင်တွေကို မျှဝေရုံသာမက တူညီတဲ့ဘဝအခြေခံမူတွေနဲ့ ဝိညာဉ်ဖော်တစ်ဦးကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
World Chatroulette - မည်သူ့ကိုမျှ လျစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်သော ဆိုက်တစ်ခု
မကြာခဏဆိုသလို သူတို့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုသော မိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေးများသည် လူမှုကွန်ရက်များတွင် အသိအကျွမ်းအသစ်များကို ရှာဖွေကြပြီး ၎င်းတို့လိုချင်သောရလဒ်ကို အမြဲမပေးတတ်ပေ။Chatroulette နဲ့ ယှဉ်ရင် တခြားလူကို သေချာမသိနိုင်တာကြောင့် အဲဒီ့မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်ရှာဖို့က တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။လူများအကြိုက်များသော ဒုတိယရွေးချယ်မှုမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုမိုရေပန်းစားလာသော အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများနှင့် အွန်လိုင်းတွင် ချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုချတ်၏ရေပန်းစားမှုသည်၎င်းကိုအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်ကွဲပြားစေသောအားသာချက်များစွာကြောင့်ကြီးထွားလာသည်။လူသစ်ရှာဖွေခြင်း၏ ဤထူးခြားသောနည်းလမ်းသည် စိတ်ဝင်တစားရှိလှသော အာရုံကြောများကို ကြည်နူးစရာကောင်းပြီး နေ့စဉ်ဘဝတွင် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ပေါင်းထည့်သည့် ဆန်းကြယ်သောလေထုနှင့် အံ့အားသင့်စရာအချက်များဖြင့် ယောက်ျားလေးများနှင့် မိန်းကလေးများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်စေသည်။
အားလုံးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ အခုချက်ချင်းစကားပြောကစားတဲ့ဂိမ်းက လူတွေကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိခွင့်ရစေရုံသာမကဘဲ ဘယ်လောက်ပဲ ဝိရောဓိဆန်နေပါစေ မိသားစုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ယင်းကြောင့်၊ ခေတ်သစ်ဘဝ၏ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်ဖော်ကို ရှာတွေ့ရန် အချိန်နှင့်အခွင့်အရေးကို ရိုးရှင်းစွာမရှာဖွေသော တစ်ကိုယ်ရေအသုံးပြုသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေကြသည်။
ဘရောက်ဆာရှိ Chatroulette - တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
ခေတ်မီနည်းပညာများသည် ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေပြီး ဆက်သွယ်ရေးအမျိုးအစားအားလုံးကို တိုးတက်စေသည်။ယနေ့တွင်၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ရုရှားလူမျိုးများနှင့် စကားပြောဆိုခြင်း၏ကျေးဇူးကြောင့် လူများသည် အိမ်မှမထွက်ဘဲ အချင်းချင်း စကားပြောနိုင်ပြီး တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ကျပန်းသူစိမ်းများကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ယခုအခါတွင် ယောက်ျားလေးများနှင့် မိန်းကလေး အများအပြားသည် အတွေ့အကြုံသစ်များကို ရှာဖွေကြပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် အကျိုးရှိရှိ အချိန်ဖြုန်းလိုသည့် ယောက်ျားလေးများနှင့် မိန်းကလေးများစွာကို ယခုအချိန်တွင် လူတိုင်းက အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ Yandex ဘရောက်ဆာရှိ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကစားပုံသည် လူသစ်များကိုရှာဖွေရန် ခေတ်မီနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရာအားလုံးကို မတော်တဆဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။သင်ဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို ငြီးငွေ့နေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားရရင်၊ သူစိမ်းတွေနဲ့ ကြုံရာကျပန်းစကားပြောဆော့ကစားတဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ အငွေ့အသက်ထဲကို နစ်မြုပ်ဖို့ သေချာပေါက် အချိန်တန်ပါပြီ။ငါ့ကိုယုံပါ၊ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့၊ တကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ လုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းကို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရှာတွေ့ဖို့ခက်တယ်။
လှပတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖို့ တစ်ခါမှ မကြိုးစားဖူးဘူးဆိုရင်တောင်မှ လူသစ်တွေနဲ့တွေ့တာ၊ သူငယ်ချင်းဖွဲ့တာ၊ အချစ်ရေးတည်ဆောက်တာတွေတောင် အဆင်ပြေပြီး လူကြိုက်များတဲ့နည်းလမ်းအကြောင်း သင်ကြားဖူးမှာပါ။ကင်မရာမှတစ်ဆင့် chatroulette ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပြီး သင်၏နေ့စဉ်ဘဝကိုပြောင်းလဲကာ ပိုပျော်ရွှင်သောလူတစ်ဦးဖြစ်လာရန် မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုကြည့်ပါ။
ရုရှားစကားပြောကစားတဲ့ ဂိမ်းက ဘာကြောင့် လူကြိုက်များတာလဲ။
အမှန်မှာ chatroulette သည် အချိန်ကောင်းကို ရရှိစေသည် ။ဤအရာသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ဝဘ်ချတ်ကစားသော သင့်အာရုံစိုက်မှုကို ပေးဆောင်ပြီး အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်သည် နေ့စဉ်ဘ၀တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်တွေ့ဆုံရန် သတ္တိကို မည်သို့စုဆောင်းရမည်ကို မသိပါက၊ ဤဗီဒီယိုချက်တင်တွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အခွင့်အရေးကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ထူးခြားသောအခွင့်အရေးရှိသည်။
Chatroulette သည် သင့်အား ရိုးရှင်းသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စကားဝိုင်းတစ်ခုကို စတင်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
သင်ထိုင်ပြီး ကျပန်းစကားဝိုင်းကို လှန်ပြီး သင်နှစ်သက်တဲ့လူနဲ့ စကားစမြည်ပြောတဲ့အခါ ချတ်ကစားတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဂိမ်းပါ။
ဤနေရာတွင် သင်သည် သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကို မျှဝေနိုင်သည့်အပြင် ဂစ်တာတီးခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်းစသည်ဖြင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူကို စိတ်ဝင်စားစေနိုင်သည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်း မှန်ပါသည်- အချို့က chatroulette တွင် အကြံပြုချက်များကိုပင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။- မှတ်ပုံတင်မပါဘဲချိန်းတွေ့သောမိန်းကလေးများအတွက်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေက ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တာကြောင့် ဒီစာရင်းကို အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Chatroulette သည် လူများကို သူစိမ်းများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချတ်လုပ်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ချက်တင်ကစားတဲ့ (Ru ကစားတဲ့၊ ရုရှားချက်တင်ကစားတဲ့ စသည်ဖြင့်) ရဲ့ analogues အနည်းငယ်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ ဒါကို လူတော်တော်များများ မသိကြသေးပါဘူး။
KuMit chat - မိန်းကလေးများနှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရန်အတွက် ပရီမီယံဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ဂိမ်း
ကမ္ဘာကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားရမည့်အချိန်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲနေသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသစ်များပေါ်လာပြီး အဟောင်းများသည် အတိတ်သို့ရောက်သွားသည်၊ အင်တာနက်သည် ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ပညာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများကို အစားထိုးနိုင်သည်၊ လူမှုကွန်ရက်များနှင့် instant messenger များသည် ခေတ်ပြိုင်အားလုံးနီးပါး၏ဘဝ၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဒါပေမယ့် ထောင်ပေါင်းများစွာကြာအောင် မပြောင်းလဲသေးတဲ့ ဒီရေပိုက်ကြီးထဲမှာ တစ်ခုခုရှိတယ်။ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအတွက် ဆက်သွယ်ရေး၊ မိတ်ဆွေစစ်နှင့် ဝိညာဉ်ဖော်ကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်သည်။အဆုံးသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများသာ ပြောင်းလဲနေပါသည်။
ဤကိရိယာများထဲမှတစ်ခုမှာ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချတ်များဖြစ်သည်။၎င်းသည် ယခုဆယ်နှစ်ကျော်ကတည်းက လူကြိုက်များသည့်ပုံစံဖြစ်ခဲ့သည်။ခေတ်မီဝဘ် ချက်တင်အားလုံးသည် လက်ရှိစံနှုန်းများနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီဟု ဆိုရပါမည်။များစွာသော chatroulette များသည် ကောင်းမွန်သော ထိန်းညှိမှု၊ တက်ကြွသော ပရိသတ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့ကို ကြွားဝါခြင်း မပြုနိုင်ပါ။သို့သော် ခြွင်းချက်ရှိပါသေးသည်။၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ ရုရှားဗီဒီယိုချက်တင် CooMeet ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် စိတ်အဖော်ကို ရှာဖွေခြင်းအတွက် အဆင်ပြေသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အလွန်ကောင်းမွန်သော ထိန်းညှိမှုနှင့် အပြစ်ကင်းစင်သော အလုပ်သည် မိန်းကလေးများနှင့် ဤဗီဒီယိုချတ်ကို ၎င်း၏အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
CooMeet ပရီမီယံဗီဒီယိုချတ်သည် ဝဘ်ကင်မရာချတ်များကြားတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပြီး တီထွင်ဖန်တီးနေသည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ပြီးတော့ ဒါက ရန်ပုံငွေလိုတယ်။ကြော်ငြာများနှင့် ပေါ်လာသည့်နဖူးစည်းများဖြင့် ဆိုက်ကို ၎င်းမှ အမြတ်ထုတ်ရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှိုက်များကို စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်။ဒါပေမယ့် သုံးစွဲသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် မမှန်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့် CooMeet Premium သည် အခကြေးငွေအနည်းငယ်ဖြင့် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အင်္ဂါရပ်အားလုံးကို ခံစားနိုင်စေမည့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။၎င်းသည် အမှန်တကယ် အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်စေသည်-
လုံခြုံရေးနှင့် လျှို့ဝှက်ရေး အမြင့်ဆုံးအဆင့်၊
site ပေါ်တွင် bot များနှင့် အတုများ လုံးဝမရှိခြင်း၊
အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သော ဗီဒီယိုနှင့် အသံအရည်အသွေး၊
သင့်လျော်သော စကားဝိုင်းများကို ရှာဖွေရန် အဆင်ပြေသောကိရိယာများ။
အကောင်းဆုံးမှာ၊ သင်သည် အစမ်းသုံးကာလအတွင်း CooMeet ကို အခမဲ့သုံးနိုင်သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် သူစိမ်းများနှင့် ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။အခမဲ့ကာလ ကုန်ဆုံးချိန်တွင်၊ ပရီမီယံအသုံးပြုခွင့်ကို ဝယ်ယူရန်၊ မဝယ်ရန် သင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။ဒါပေမယ့် သင်က သံသယတောင် မရနိုင်ပါဘူး - သင်က ကြိုက်လိမ့်မယ်။
ချတ်ကစားတဲ့ KuMit ကိုရှာဖွေတဲ့အခါ အမှားအယွင်းများ
CooMeet chatroulette ၏အမည်ကိုထည့်သွင်းသည့်အခါ အဓိကအမှားမှာ ပေါ့လျော့မှုဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ comeet၊ coomet၊ coo meet၊ coomeets၊ coomee၊ coomate၊ coommet၊ coomeeet၊ coomet၊ coomet၊ comet chat နှင့် အခြားအရာများ။အန္တရာယ်ကဘာလဲ။
ကိစ္စအများစုတွင်၊ သင်သည် ရှာဖွေမှုတွင် ဆိုက်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရှာမတွေ့နိုင်သော်လည်း Google သည် သင်ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ပြီး မှန်ကန်သောလင့်ခ်ကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။သို့သော် အဆိုးဆုံးမှာ၊ CooMeet အွန်လိုင်းနှင့် ဆင်တူသော အထူးနာမည်ကို အသုံးပြုသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများ၏ ဆိုက်သို့ သင်ရောက်ရှိရန် အန္တရာယ်ရှိသည်။ဤနေရာသည် ပို၍ပြင်းထန်သောဒုက္ခများ စတင်နိုင်သည် ။
အကြံဉာဏ်!CooMeet ဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာကို အက္ခရာဖြင့် စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးပါ။အလားတူ၊ iOS သို့မဟုတ် Android အက်ပ်စတိုးများရှိ တရားဝင် CooMeet အွန်လိုင်းချတ်အက်ပ်ကို ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုပါ။
CooMeet သည် ရုရှားစကားပြောကစားရုံသာမကကြောင်း သတိရပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် အလုပ်လုပ်ပါသည်။အောက်ခြေရှိ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် သင့်နိုင်ငံကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် - ဆိုက်ကို သင့်အဆင်ပြေစေရန် သင့်လျော်သောဘာသာစကားဖြင့် ချက်ချင်းပြသပါမည်။
1. သင်သည် CooMeet ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပြီး chatroulette စတင်ရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
2. သင်၏ လိင်ကို သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒကို သဘောတူပါ။
3. သင့်ဝဘ်ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို ဝဘ်ဆိုက်အား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါ၊ ထို့နောက် ကျပန်းအသုံးပြုသူများနှင့် စတင်စကားပြောပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည် သင့်ဆိုဒ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါက၊ စနစ်သည် သင့်အား စာရင်းသွင်းရန်နှင့် chat roulette တွင်မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောခြင်းအတွက် အခမဲ့မိနစ်များရယူရန် သင့်အား ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤကောင်းသောဆုကြေးငွေကို အခွင့်ကောင်းယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
စကားမစပ်၊ ချတ်ဆက်တင်များတွင် သင်သည် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် စာတိုချတ်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်လိုသည့်နည်းလမ်းကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။"Messages" ပိတ်ဆို့ခြင်းတွင်၊ သင်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုကိုလည်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ လူတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မှု ပေါင်းထည့်ခြင်း မပြုပါက၊ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် နောက်တစ်ခုသို့ ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် တစ်ညနေခင်းလေးတွင် သင်သည် စိတ်ဝင်တစားရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး၊ သူငယ်ချင်းကောင်းများ ရှာဖွေနိုင်ပြီး ဝိညာဉ်ဖော်တစ်ဦးပင် ဖြစ်သည်။မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆို တွေ့ဆုံစကားပြောပါ၊ လက်တွေ့ဘဝတွင် အစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ကာ နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုစတင်ပါ။
ယဉ်ကျေးပြီး စိတ်ရှည်ပါ၊ သင့်ချစ်သူကို မရိုင်းစိုင်းပါနဲ့ သူတို့အပေါ် မှန်ကန်စွာ ပြုမူပါ။ဤအရာများသည် အွန်လိုင်း chatroulette တွင်သာမက ယေဘုယျအားဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရေး၏ အခြေခံအကျဆုံး စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်း chatroulette မှာ ဆက်သွယ်မှုအတွက် အထူးအသုံးဝင်မယ့် အကြံပြုချက်အချို့ရှိပါတယ်။
1. သင့် webcam နှင့် အလင်းရောင်ကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။သင့်ကင်မရာမှပုံသည် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး စားပွဲပေါ် သို့မဟုတ် အခြားတစ်နေရာရာမှာမဟုတ်ဘဲ သင့်ဆီသို့ အတိအကျ ဦးတည်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
2. အသံအရည်အသွေးကို ဂရုစိုက်ပါ။မကောင်းသောမိုက်ခရိုဖုန်းသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။အသံအရည်အသွေးညံ့ရင် အသစ်ဝယ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ပုံစံတောင် လုပ်မယ်။
3. CooMeet ၏မူဝါဒများကိုချိုးဖောက်သောအသုံးပြုသူများကိုသတင်းပို့ပါ။လက်မခံနိုင်သော အပြုအမူများကို စောင့်ကြည့်ပြီး ချိုးဖောက်သူများကို အချိန်မီ တားမြစ်ရန် ကြိုးစားပါသည်။သို့သော် သင့်အကူအညီဖြင့်၊ ထိန်းညှိမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုထိရောက်သည်။
4. ဆက်သွယ်မှုမစတင်မီ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရာများကို စီစဥ်ထားလိုက်ပါ - ဤနည်းဖြင့် သင်သည် စကားစမြည်ပြောဆိုသူ၏မျက်လုံးများတွင် သပ်ရပ်ပြီး သပ်ရပ်နေမည်ဖြစ်သည်။5 မိနစ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ - သင်နောင်တရမည်မဟုတ်ပါ။
5. စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင်၊ စခရင်ကိုသာမက ဝဘ်ကင်မရာကိုလည်း ကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီတော့ စကားဝိုင်းက မင်းကို မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်နေတာလို့ အထင်ကြီးလာလိမ့်မယ်။၎င်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ CooMeet chatrandom ကို ပျော်ရွှင်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံပါ၊ စိတ်ဝင်စားစရာလူတွေကို ရှာဖွေပြီး အပြုသဘောနဲ့နေပါ။ဤသည်မှာ မည်သည့် chatroulette တွင်မဆို အောင်မြင်မှု၏ အဓိက စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။
ဝဘ်ဆိုက်ရှိ လင့်ခ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် Chatroulette အွန်လိုင်းတွင် မည်သို့အလုပ်လုပ်ကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
စကားပြောခန်းတွင် ကောင်းမွန်သော interface ရှိသည်။ဒေတာဘေ့စ်တွင် စာရင်းသွင်းသူ အများအပြားပါရှိသည်။ဒါပေမယ့် သူတို့ကြားမှာ မှန်ကန်တဲ့ တစ်ယောက်ကို ရှာဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။Chat သည် သင့်အတွက် စကားဝိုင်းကို ရွေးချယ်ပါမည်။ကင်မရာမှတဆင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် သင့်အား ကျပန်းလူတစ်ဦးနှင့် နီးစပ်ရန် အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။တွေ့ကြုံရမယ့် အတွေ့အကြုံမျိုးကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။သင့်ချစ်သူကို သင့်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခု ပြောပြနိုင်သလို သူ့အကြောင်း အများကြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။Chatroulette သည် သင့်အား ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖယ်ရှားပြီး ပိုမိုပွင့်လင်းသော လူတစ်ဦးဖြစ်လာရန် အခွင့်အရေးပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုသည် ထူးထူးခြားခြား မြင့်တက်မှုနှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ် ကျဆင်းမှု ကာလများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ၎င်း၏နယ်ပယ်တွင် အလွန်ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။အားနည်းချက်မှာ အမှန်တကယ်အားဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူတိုင်းမနှစ်သက်သည့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများ၏မျက်နှာများအစား ချတ်တွင် အခါအားလျော်စွာ ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာအားသာချက်များ "ကျ" သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို၊ တက်ကြွသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အနည်းဆုံး instant messenger အနည်းငယ်၊ လူမှုကွန်ရက်အချို့မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ကြသည်။ကွန်ရက်များနှင့် မလိုအပ်ဘဲ ဖြစ်ပျက်နေလျှင်ပင် အနည်းဆုံး ဖိုရမ်တစ်ခုသို့ ဧည့်သည်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ဖိုရမ်များအကြောင်း ပြောရာတွင်၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုချက်ကို ယခု မျက်စိမှိတ်ပြနေပါက၊ ခိုးကူးမှုမှာ လုံးဝကွဲပြားသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်ယူခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် မီဒီယာအကြောင်းအရာ၏ terabytes ကြီးမားသော အရင်းအမြစ်များကို သတိရပါ။
Chatroulette ဆိုတာ ဘာလဲ
သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ရှာချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် ပျော်စရာကောင်းချင်ရင် Chat Roulette ကို သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ဤချတ်၏ထူးခြားချက်မှာ သင့်ချစ်သူကို သင်ကိုယ်တိုင်မရွေးချယ်ဘဲ တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။စနစ်သည် သင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ပါတနာကို ကျပန်းရွေးချယ်သည်။လူသစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရသည့်အခါတိုင်း ၎င်းသည် စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုးပွားစေသည်။ဒီလိုပြောဆိုဆက်ဆံမှုက စိတ်တွေကို တက်ကြွစေပြီး စိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆွပေးပါတယ်။
Chat Roulette ရှိ ဆက်သွယ်ရေးသည် လူများကို အခြေအနေအသစ်များနှင့် လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ မိမိကိုယ်ကို လွတ်မြောက်ရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။အရှက်အကြောက်ဆုံးသော ချစ်သူများပင်လျှင် သူစိမ်းများနှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ကြသည်။Chat Roulette သည် အခြား chat room များနှင့် မတူပါ။ပြီးနောက်၊ ကျပန်းရွေးချယ်ထားသော စကားဝိုင်းသည် သင့်ဘဝကို များစွာပြောင်းလဲစေပြီး သင့်အား စိတ်ခံစားမှုပင်လယ်ဝေစေသည်။ဤဗီဒီယိုချတ်သည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤချတ်တွင် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည်မှာ ကွန်ပျူတာနှင့် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဖြစ်သည်။အစစ်အမှန်လူများသည် စကားဝိုင်းတွင် ပါဝင်ကြသည်၊ ဤနေရာတွင် လှည့်စားခြင်း မရှိပါ။ထို့ကြောင့် ချတ်ပါဝင်သူများသည် အမြဲတမ်း သာယာသောမျှော်လင့်ချက်တွင် ရှိနေပါသည်။စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး အသိမိတ်ဆွေများအားလုံး မတော်တဆဖြစ်တတ်သောကြောင့် လူများက ChatRoulette ကိုရွေးချယ်ကြသည်။မိတ်ဆွေသစ်များ ဖွဲ့နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်အချစ်ကိုပင် ရှာဖွေနိုင်သည်။
Chat Roulette ရှိ ဆက်သွယ်ရေးသည် သင့်အား လျစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။သင်နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ငြီးငွေ့ပြီး အတွေ့အကြုံသစ်များလိုချင်ပါက Chatroulette သည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်မှုမစတင်မီအချိန်တိုင်း၊ သင်သည် မည်သို့သော စကားအဖော်မျိုးနှင့် တွေ့လာမည်ကို သာယာဖွယ်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု၌ ရှိနေလိမ့်မည်။ဒီနေ့မှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောရမှာဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်တဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပြီး အဝေးနိုင်ငံတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို ပြောပြပေးမှာပါ။Chatroulette သည် လွမ်းဆွေးခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းမှ ကောင်းမွန်သော ကယ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်စကားဝိုင်းစခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ရွေးချယ်မှုသည် မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မေ့သွားလိမ့်မည်။အကွာအဝေးကို ဖျက်လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး တူညီသောလှိုင်းအလျားတွင် သင်စတင်ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Chatroulette သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူများနှင့် အမည်မသိ ဆက်သွယ်မှုများအတွက် ထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။သင်ကဲ့သို့ပင် သူငယ်ချင်းအသစ်များ လိုချင်သော သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးထံ ၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်ကို သွန်းလောင်းပေးလိုသော သုံးစွဲသူအများအပြားကို သင့်တွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အပလီကေးရှင်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကာအကွယ်များပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများသည် သင့်ဒေတာ၊ တည်နေရာ သို့မဟုတ် အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
မကြာသေးမီက လူအများအပြားသည် အထူးဆိုက်များ သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိုကြသည်။သို့သော် ထိုဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပြဿနာမှာ တည်နေရာ၊ အသက်၊ ပညာရေးစသည်ဖြင့် သင့်ဒေတာများကို နေရာချထားမှုအပြင် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းသည် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုသူတိုင်းသည် ထိုသို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မျှဝေလိုခြင်းမရှိပါ။
Chatroulette အက်ပလီကေးရှင်းသည် introvert များအား သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနေရာအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ ဆက်သွယ်ရန် ထူးခြားသောအခွင့်အရေးကို ပေးပါသည်။ဤချတ်ကို နာရီပတ်လုံး ထိန်းညှိပေးသူများက စောင့်ကြည့်နေသောကြောင့် စကားမစပ်သူ၏ မလိုလားအပ်သော အပြုအမူမျိုး ကြုံလာလျှင် သူ့အကြောင်း တိုင်ကြားနိုင်ပြီး အက်ဒ်မင်များက ၎င်း၏ စာမျက်နှာကို ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် မည်သည့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ဖြတ်သန်းရန် သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်ကို စတင်အသုံးပြုရန်ပင် မလိုအပ်ပါ။"စတင်သည်" ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် စကားအပြောအဆိုများကို စတင်ရှာဖွေပါ။ချတ်သည် ရုရှားစကားပြောဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးတွင် ပြဿနာမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ပါသည်။သင့်ဘာသာစကားပြောသော သူငယ်ချင်းများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပြီး ချက်ခြင်းစတင်စကားပြောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စကားဝိုင်းများကို ကျပန်းရွေးချယ်နိုင်သည်။အကယ်၍ သင်သည် ရုတ်တရက် ဆက်သွယ်မှုတွင် သောင်မတင်ရေမကျ ဖြစ်သွားပါက သို့မဟုတ် သင်သည် ဤလူကို ရိုးရှင်းစွာ မကြိုက်ပါက၊ ရှင်းလင်းချက်နှင့် အဆင်မပြေသော တိတ်ဆိတ်မှုကို မလိုအပ်ပါ။"Next" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သူနှင့်စကားပြောခြင်းကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။စကားဝိုင်းတစ်ခုအတွက် သင်သည် ဝဘ်ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို သုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်များမှတစ်ဆင့် ချတ်လုပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
ဤချတ်သည် သာမန် messenger မျှသာမဟုတ်ပါ။သူ့ကျေးဇူးကြောင့် သင်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထူးခြားပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤနေရာတွင် သင်သည် စာရေးနိုင်ရုံသာမက သင်၏အရည်အချင်းများနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော စွမ်းရည်များကိုလည်း မျှဝေနိုင်ပါသည်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကို သင်မတိုက်မိမချင်း ရနိုင်တဲ့အသုံးပြုသူများစာရင်းကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
ပထမအထင်အမြင်မှာ သင့်ရုပ်ပုံကို တောက်ပပြီး မမေ့နိုင်စေရန်အတွက် အသေးစိတ်အချက်အားလုံးကို ကြိုတင်စဉ်းစားပါ။သင့်စိတ်ကြိုက်စာအုပ်၊ ပျော့ပျောင်းသောအရုပ် သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို ယူဆောင်ကာ ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းဖြင့် သင့်စကားပြောဆိုသူများရှေ့တွင် ပေါ်လာပါ။ထို့ကြောင့် သင်သည် မှန်ကန်သောထင်မြင်ယူဆချက်ကို ချက်ချင်းဖန်တီးနိုင်သည့်အပြင် သုံးစွဲသူတစ်သန်းကြားတွင် အမှန်တကယ် စိတ်တူကိုယ်တူရှိသူများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
Chatroulette မှကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည်မသိ ဗီဒီယိုချတ်ကို အသုံးပြုသူ 200,000 ကျော်က နေ့စဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုပါသည်။အဲဒီအထဲမှာ မင်းစိတ်ကြိုက်အဖော်ကို မင်းသေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မယ်။
၎င်းသည် သင့်ဝဘ်ကင်မရာကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူများနှင့် ချတ်လုပ်နိုင်သည့် အမည်မသိ ဗီဒီယိုချက်တင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။"Start" ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် သုံးစွဲသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကြားတွင် သင့်အတွက် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူကို ရွေးချယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။မင်းရဲ့ စကားဝိုင်းကို ဘယ်သူကမှ သိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ သူဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ မင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့် ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက - စကားဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိခွင့်ရပြီး ဘုံအကျိုးစီးပွားကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့် စကားပြောသူကို မကြိုက်ပါက "Next" ကိုနှိပ်ပြီး နောက်တစ်ခုသို့ ဆက်သွားပါ။နှုတ်ဆက်ရန်၊ တောင်းပန်ရန် သို့မဟုတ် ဆင်ခြေပေးရန် မလိုအပ်ပါ။
အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး!ကျွန်ုပ်တို့၏ချတ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ အမည်မသိဖြစ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသောမှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပါ။အကောင့်ဝင်ခြင်းနှင့် စကားဝှက်များကို တီထွင်မှတ်သားရန်၊ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကို အတည်ပြုရန် မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏အမည်ဝှက်ကို လေးစားပါသည်- သင့်စကားပေးသူက ဤအချက်အလက်ကို သင်သူတို့နှင့်မျှဝေရန်မရွေးချယ်ပါက သင့်အမည် သို့မဟုတ် သင်ဘယ်ကလာသည်ကို သိမည်မဟုတ်ပါ။စကားစမြည်ပြောဆိုသူ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် သို့မဟုတ် ရိုင်းစိုင်းသော အပြုအမူကို ငြင်းခုံရန် မလိုအပ်ပါ။သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားပြောခန်း သို့မဟုတ် ဥပဒေ၏ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက၊ သင့်တိုင်ကြားချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ချိုးဖောက်သူကို ပိတ်ဆို့မည့် စိစစ်ပေးသူကို အမြဲတမ်း တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
အင်တာနက်၊ webcam နဲ့ စိတ်ထားကောင်းတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်မှာ webcam မရှိဘူးဆိုရင်တောင် အရေးမကြီးပါဘူး၊ မိုက်ခရိုဖုန်းက လုံလောက်လိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် ညာဘက်မှာရှိတဲ့ window မှာ text chat ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။သို့သော် လူများသည် စကားအပြောအဆိုကို မြင်ရန် အဓိကအားဖြင့် ဗီဒီယိုချတ်သို့ လာရောက်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် ကင်မရာသည် မလိုအပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ။
ဤတွင် သင်သည် ဘုရင်မင်းမြတ် Chance ၏ အလိုတော်ကို အားကိုးရမည်ဖြစ်သည်။စကားဝိုင်းကို မကြိုက်ပါက နောက်တစ်ခုသို့ အမြဲသွားနိုင်သည်။Chatroulette သည် အသုံးပြုသူများ ရုရှားစကားပြောသည့် အကြီးဆုံး ဗီဒီယိုချတ်ဖြစ်သောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားစုစာအုပ်မှ စကားစုများကို သင်မှတ်မိရန် မလိုအပ်ပါ - သူတို့က ဤနေရာတွင် သင့်ကို နားလည်ပါသည်။
မုန့်လုပ်ရတာ လွယ်တယ်။"Start" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ပြုံးပြီး "Hi!" ဟုပြောခြင်းဖြင့် ချတ်တစ်ခုစတင်ပါ။စကားဝိုင်းမှ အစပြုမှုကို မစောင့်ပါနှင့်၊ ၎င်းကို ဦးစွာပြသပါ။စကားစမြည်ပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ရှက်ရွံ့နေကြသော်လည်း ပထမခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံးဝအချည်းနှီးကြောက်လန့်သွားသည်ကို နားလည်ပါသည်။သတိရပါ- လူတိုင်းသည် ချတ်တွင်တန်းတူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် သင်နှင့်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်သည် - နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့် စိတ်ခံစားချက်ကောင်းများရရှိရန်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး အသိအကျွမ်းများ ကံကောင်းကြပါစေ။
Chatroulette KuMit - ဝဘ်ကင်မရာတွင် မိန်းကလေးများနှင့် တွေ့ဆုံပါ။
ထက်မြက်ပြီး လှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့ အမြန်လမ်းရှာနေပါသလား။ဝဘ်ချတ်ကစားတဲ့ CooMeet (CooMeet ၏ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း) သည် သင့်အိမ်မှမထွက်ဘဲ မတူညီသောနိုင်ငံများမှ မျှတသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်စေပါသည်။လက်ငင်းချိတ်ဆက်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့် တိကျသေချာသော ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုမရှိစေဘဲ သင့်အား အမြဲပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံပေးမည့် အကောင်းဆုံးစကားဝိုင်းများသာဖြစ်သည်။
ယနေ့အချိန်သည် မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်တစိုက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန်၊ ခြွေတာရန်နှင့် အလျင်စလိုလုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားသည့်အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မရှိပါ။ဒီလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမှာ ချိန်းတွေ့ခြင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ နောက်ကွယ်မှာ နေရာယူလေ့ရှိတယ်။တရားဝင် KuMit ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မိန်းကလေးများနှင့်သာ အရည်အသွေးမြင့်သော ဆက်သွယ်မှုကို အာမခံသည် - အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများ၊ အသိမိတ်ဆွေအသစ်များနှင့် ခံစားချက်ကောင်းများ။
ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရွေးချယ်မှုစနစ်သည် သင့်အား ချစ်စရာကောင်းသော သူစိမ်းထောင်ပေါင်းများစွာထဲမှ တစ်ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။မိန်းကလေးများအားလုံး တွေ့ဆုံရန်၊ စကားပြောရန်၊ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် ဤနေရာသို့ လာကြောင်း သေချာပါစေ။KuMit Chat ကဲ့သို့ တူညီသောအဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါ-
မှတ်ပုံတင်ထားသော မိန်းကလေးတစ်ဦးစီ၏ လက်ဖြင့် ထိန်းညှိပေးခြင်း၊
ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တိုးတက်စေခြင်း။
Omegle နှင့် ChatRoulette အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ
အွန်လိုင်းကစားတဲ့ကစားနည်းကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ကျပန်းဆက်သွယ်မှုရဲ့ မူလအစမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ချတ်တွေကို မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။၎င်းတို့သည် 2022 ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပေါ်လာသည့် Omegle နှင့် ChatRulet တို့ဖြစ်သည်။ပထမတစ်ခုက နိုင်ငံခြားကနေ ကျွန်တော်တို့ဆီရောက်လာပြီး၊ ဒုတိယကတော့ ရုရှားကျောင်းသူလေး Andrei Ternovsky ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဝဘ်ချတ်နှစ်ခုလုံးသည် တူညီသောနိယာမအပေါ် အခြေခံသည်- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျပန်းစကားပြောဆိုသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှု။Omegle သည် လအတော်ကြာအောင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အိပ်ခန်းကို အုပ်စိုးသော ChatRoulette ဖြစ်သည်။သို့သော်၊ chat-random နှစ်ခုလုံးသည် နောက်ဆုံးတွင် တူညီသော “ရောဂါ” ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းမှာ ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းမှ အများအပြားကို တွန်းလှန်နိုင်သေးသည်။
ဤသည်မှာ မသင့်လျော်သော အကြောင်းအရာများအကြောင်းဖြစ်သည်။စံပြကမ္ဘာတစ်ခုတွင်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သိကျွမ်းလိုသော၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုကာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စိတ်ခံစားချက်ကောင်းများပေးလိုသော အပြုသဘောဆောင်သော၊ ဖော်ရွေသောသူများသည် ဗီဒီယိုကစားကွက်ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။တကယ်တော့:
မကြာခဏဆိုသလို သင်ဟာ ကျပန်းစကားပြောဆိုသူတစ်ယောက်ကို သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်သီလတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုတဲ့ ပြပွဲသမားတွေကို မကြာခဏ တွေ့ဖူးပါတယ်။
လှပသောမိန်းကလေးသည် ရင်းနှီးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်သည့် အသက်အကြီးဆုံးအလုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
နောက်ချိတ်ဆက်မှုသည် သင့်အား ကြော်ငြာအကြောင်းအရာသက်သက်ပါသော အငြိမ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို ခံစားခွင့်ကို ပေးလိမ့်မည်။ဟုတ်တယ်၊ PR လူတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုကို သင်ငြင်းလို့မရပါဘူး။
ထို့နောက် ဖန်သားပြင်၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် မည်သူဖြစ်မည်ကို သင်မစိုးရိမ်နိုင်သည့် ကျပန်းဗီဒီယိုချတ်တစ်ခု လိုအပ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားလာခဲ့သည်။တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ဗီဒီယိုချတ်များကြားတွင် ရှေ့ဆုံးတွင် KuMit ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ပါဝင်သူများ၏ ထိန်းညှိပေးခြင်းနှင့် ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုစီအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အလားတူဝန်ဆောင်မှုများ၏ နာကျင်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။အစကတည်းက၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ အလိုအလျောက်စနစ် အပြည့်အ၀ကို အားကိုးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားပါသည် - ၎င်းတို့အသုံးပြုသည့် ဆိုက်၏ အားသာချက်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို သုံးစွဲသူများ နားလည်စေရန် အရည်အသွေးမြင့် လူသားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ပြီးတော့ ကြိုးစားမှုလည်း ပြေသွားတယ်။
ယနေ့ - KuMit သည် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးနှင့် အလုံခြုံဆုံး ကျပန်း ဝဘ်ချတ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါကို ဘယ်သူမဆို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။"Start Search" ကိုနှိပ်ပြီး အွန်လိုင်းကစားတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။
အွန်လိုင်းတွင် အလှဆုံး ရုရှားမိန်းကလေးများ
ချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် အွန်လိုင်းတွင် စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာချိန်မှစ၍ အချစ်ရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလာပါသည်။နှင့် chatroulette သည် လူမှုကွန်ရက်များနှင့် ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုဒ်များကို ချိတ်ဆက်ကာ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးနှစ်ခုနဲ့မတူဘဲ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုသူရဲ့ မျက်လုံးတွေ၊ သူမရဲ့ အပြုံးနဲ့ ကီလိုမီတာရာနဲ့ချီဝေးတဲ့ အကွာအဝေးမှာတောင် အနီးနားကနေ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို သင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုချတ်တစ်ခုထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
သံသယရှိနေတုန်းပဲလား။အခမဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ပရိုဖိုင်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ပရိုဖိုင်ကိုဖြည့်စရာမလိုဘဲ ယခုပင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျပန်းဗီဒီယိုချတ်တွင် မိန်းကလေးများနှင့် စတင်စကားပြောပါ။KuMit ဗီဒီယိုချတ်ကို စတင်ရန်အတွက် သင်သည် ဝဘ်ကင်မရာတစ်ခုသာ လိုအပ်ပါသည်။အကယ်၍ စကားဝိုင်းသည် သင့်အရသာနှင့် မကိုက်ညီပါက - ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် သူစိမ်းအသစ်သို့ ပြောင်းပါ။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မိန်းကလေးများသည် သင့်အား စောင့်မျှော်နေပြီဖြစ်သည်။
နောက်ပြောင်မှုများအတွက် အခြားသူတစ်ဦး၏ chat-roulette တွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နည်း
မင်္ဂလာပါ ချစ်မိတ်ဆွေ၊ဒီနေ့တော့ chatroulette prankers တော်တော်များများဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ် ၊ တစ်ယောက်ယောက်က ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုစာရင်းသွင်းသူ (စာရင်းသွင်းသူ)ထောင်ဂဏန်းလောက်တောင်း ပေမယ့် ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အထူးသဖြင့် သင့်အတွက် အခမဲ့မျှဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ငါမင်းကိုချက်ချင်းရှင်းပြချင်တယ်-တကယ်တော့၊ ငါတို့မှာ hacking မရှိဘူး၊ မဟုတ်ဘူး!သင်သည် စာမျက်နှာမှထွက်ခွာရန် အလျင်စလိုမဟုတ်သော်လည်း ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ၊ အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟက်ကင်းမဟုတ်၊ အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူနှစ်ဦးကို အပြန်အလှန်ပေးပို့ပါ။ပထမဦးစွာသင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကို ကွဲပြားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် OBS - Studioရဲ့ ဥပမာကို အသုံးပြုပြီး ပြပါမယ်။
အသံမီတာ (အခမဲ့)VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:Voice Meeter Virtual Cable
ဘရောက်ဆာနှစ်ခု- ဥပမာ၊ Google Chrome နှင့် Opera (သင်သည် chatroulette နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော အဆိုပါဘရောက်ဆာများကို သင်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်)
virtual obs ကင်မရာကို သင်ထည့်သွင်းသောအခါတွင် ကင်မရာ4လုံး (၂ လုံးသာ လိုအပ်သော်လည်း) တပ်ဆင်ရန် အရေးကြီးပြီး နောက်ထပ် ကင်မရာ ၂ လုံးသည် အခြားအကြောင်းကြောင့် အဆင်ပြေလာနိုင်သည်။
Chatroulette ၏စည်းမျဉ်းများအရ၊ webcam emulators များကိုအသုံးပြုရန် အမှန်တကယ်တားမြစ်ထားပြီး Chatroulette သည် အကောင့်ပိတ်ပင်မှုအပါအဝင် (သတိထားပါ)၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟက်ကာများဖြစ်ကြသည် မဟုတ်လား။ကျွန်ုပ်တို့၏ virtual ကင်မရာကို တကယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကင်မရာတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်အတူ လှည့်ကွက်အနည်းငယ်ကို registry editor တွင် ပြုလုပ်ပါမည်။
ထို့ကြောင့် ဤစာရင်းသွင်းတည်းဖြတ်သူ (regedit) ကိုဖွင့်ရန် သင်သည် စနစ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ကွန်ပြူတာအား ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်တွင်ပင် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် registry editor သို့သွားသည်- Win + R ခလုတ်များက regedit ရေးပြီး execute လုပ်သည့် ဝင်းဒိုးကို ဖွင့်ပေးမည် သို့မဟုတ် ရှာဖွေရေးအကွက်တွင် (ပရိုဂရမ်များနှင့် ဖိုင်များကို ရှာဖွေပါ) တွင် regedit ရေးပြီး ဖြတ်လမ်းကို နှိပ်လိုက်ရုံပင်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်းဖြတ်သူတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် OBS - Virtual (ဖိုင်တွဲများအားလုံးကို ဖျက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အမည်ကို ဥပမာအားဖြင့် Mycamera သို့ ပြောင်းနိုင်သည်) ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ OBS ကင်မရာ 1/2/3/4 ကို registry တည်းဖြတ်မှုတွင် ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ OLDcamera1 စသည်တို့ကို ၎င်းတို့၏အမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းပါ။သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။မဟုတ်ပါက သင်သည် registry entry များကို ပျက်စီးစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကင်မရာများကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် အန္တရာယ်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အရာအားလုံးကို မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက၊ ထို့နောက် browser ရှိ chatroulette ကို ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်၊ အောက်ခြေတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကင်မရာများနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ရှိလိမ့်မည်။ဘရောက်ဆာမှာဆိုရင်တော့ ကင်မရာနဲ့ မိုက်ခရိုဖုန်းတွေကို သင်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားမှာ သေချာပါတယ်။
ခြယ်လှယ်မှုအားလုံးပြီးနောက် သင့်တွင် ချာထရိုလက်တွင် virtual ကင်မရာမရှိပါက၊ သင်သည် မှားယွင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ ၎င်းကို ထိုနေရာမှ ဖယ်ရှားပစ်ရပါမည်။အရေးကြီးတာက chatroulette (ဟုတ်ပါတယ်၊ မအံ့သြပါနဲ့) ကင်မရာရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်တစ်ခုပါရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်၏အစစ်အမှန် webcam သည် chatroulette တွင် အမြင့်ဆုံးဦးစားပေးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် browser တွင်မဖြစ်သင့်ပါ။
အရေးကြီးသည်!မတူညီသောအကောင့်များအောက်တွင် chatroulette သို့ သင်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်-ဘရောက်ဆာနှစ်ခုလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထပ်မထပ်သင့်ပါ။
အမှားအယွင်းများကိုရှောင်ရှားရန်- Chatroulette ကို အခြားဝင်းဒိုး/ဘရောက်ဆာတွင် ဖွင့်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘရောက်ဆာနှစ်ခုနှင့် အကောင့်နှစ်ခု (vk/fb) လိုအပ်ပါသည်။
သင့်တွင်အကောင့်တစ်ခုမရှိပါ သို့မဟုတ် ပင်မတစ်ခုအပေါ်တားမြစ်ချက်မရယူလိုပါက ၊နံပါတ်တစ်ခုဝယ်ရန်၊ နံပါတ်များဝယ်ရန်နှင့် အတုနှစ်ခုဖန်တီးရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည် - ဒါကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။VKontakte သို့မဟုတ် Facebook မှတဆင့်သာ chatroulette တွင်ခွင့်ပြုချက်
ကောင်းပြီ၊ ခက်ခဲသောအဆင့်များကိုကျော်ဖြတ်သွားပုံရသည်-ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဆာများအတွက် obs ကိုသတ်မှတ်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ၊ chatroulette တွင်လှည့်စားရန်- ကျွန်ုပ်တို့၏ obs ကိုဖွင့်ပြီး မြင်ကွင်းကော်လံရှိ ပထမဆုံးဘရောက်ဆာအတွက် မြင်ကွင်းတစ်ခုဖန်တီးပါ (ဥပမာ ပထမဘရောက်ဆာကို နာမည်ပေးကြပါစို့၊ မြင်ကွင်းကော်လံရှိ၊ ဖန်တီးထားသော မြင်ကွင်းကို နှိပ်ပါ -> စစ်ထုတ်မှုများ -> virtual camera -> ပထမကင်မရာကို ရွေးပါ၊ ထို့နောက် start ကိုနှိပ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက ပထမကင်မရာရှိ ချတ်ကစားတဲ့ ပထမဆုံးဘရောက်ဆာတွင်၊ ချက်တင်ကစားတဲ့ ဝင်းဒိုးကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့ ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
မည်သည့်နေရာနှင့် နေရာတွင် ရှုပ်ရှုပ်မကင်းစေရန် စစ်ထုတ်မှုများရှိ ကင်မရာများကို ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်သောအမည်များဖြင့် ခေါ်ပါ- ဥပမာ(Virtual camera 1 chrome)ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးထွက်ရှိထားသော OBS ၏အရင်းအမြစ်ဝင်းဒိုးတွင် သင်သည် window capture ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့သည် window 1 ကိုဖမ်းယူပါမည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ချက်တင်ကစားတဲ့ဘရောက်ဆာ၏
ပိုလျှံနေသည့်အရာများ လေပေါ်မတက်စေရန် အခြားတက်ဘ်များကို ပိတ်သင့်သည်။ရင်းမြစ်များနှင့် ကင်မရာများကို စနစ်ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ချတ်ကစားတဲ့ကိုဖွင့်ပါ (VK / FB အကောင့်ဖြင့် လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ) chat Roulette ရွေးချယ်မှုဝင်းဒိုးရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးကင်မရာကို ရွေးချယ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံး OBS တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည်များကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
chat-roulette ဖြင့် window ကိုဖမ်းယူရန်လိုအပ်သည်။မပိတ်ပါက အခြားတဘ်များကို ဘောင်ခတ်ထားနိုင်သည်။
ယခု ရင်းမြစ်ဝင်းဒိုးရှိ ပထမဆုံး obs တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြတ်တောက်ရန် (crop) လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးဘရောက်ဆာတွင် ပထမဆုံးကင်မရာကိုဖွင့်ထားသည့်အတွက်၊ ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ မီးခိုးရောင်ချတ်ကစားတဲ့စတုရန်းတစ်ခုသာရှိတော့သည်။ဤနေရာတွင် သင်သတိထား၍ အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းများ အပြူးထွက်ခြင်း မရှိစေရန် သေချာစေရမည်၊ မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ပြောင်မှုများ လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤတွင်၊ တစ်ဦးချင်းဖြတ်တောက်ခြင်းဆက်တင်များအားလုံးသည် သင်ဘရောက်ဆာနှစ်ခုကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့အတိအကျထားပုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်ကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရပါပြီ။၎င်းကို ဂရုတစိုက် ဆန့်ထားရမည်ဖြစ်သော်လည်း OBS ပရိုဂရမ်စခရင်၏ အလေးချိန်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ဤကင်မရာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မအိပ်ရစေရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ချတ်ကစားတဲ့တွင် အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် အနက်ရောင်အကန့်များမရှိဘဲ မီးခိုးရောင်စတုရန်းရှိစေရန်။
ဖြတ်ညှပ်ကပ်သည့်အခါ ဆက်တင်များတွင်လည်း -> အသွင်ပြောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည် -> ၎င်းကို မလုပ်ပါက အလျားလိုက်လှန်ပါ၊ mirroring effect တစ်မျိုးမျိုးရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား 100% ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငါမင်းကိုဒီမှာရေးခဲ့သလို မင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်- ငါ့ရဲ့စခရင်ပုံတွေမှာလိုအရာတစ်ခုခုကိုရသင့်တယ်။
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို obs တွင်ဆွဲဆန့်သည့်အခါ Lifehack သည်Shiftခလုတ်ကို ကိုင်ထားလျှင်အနည်းငယ်ပိုကောင်းအောင် ဆွဲဆန့်နိုင်ပြီး alt နှင့် ဆန့်ခြင်းဖြင့် ပုံအား မဆန့်ဘဲဘောင်ကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ဤလှည့်ကွက်ဖြင့်၊ သင်သည် frame မှပိုလျှံမှုများကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။နောက်တဖန်၊ ဆန့်သောအခါ သတိထားပါ၊ ဘောင်အတွင်းမှ လူသည် အလွန်ပြန့်ကား၍ မဆန့်ဘဲ ရွှေဆိုလိုသလို ချောမွေ့စေရန် ကြိုးစားပါ။
အရေးကြီးဆုံးအရာ။obs နှစ်ခုစလုံးတွင်၊ သင်၏အစစ်အမှန် webcam သို့မဟုတ် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အော်ဟစ်သံတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ချက်ချင်းဖြစ်လာစေရန်အတွက် အခြားအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယဘရောက်ဆာတွင် တူညီသောအဆင့်များကို ပထမကဲ့သို့ပင် ဒုတိယ obs တွင် ထပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ရှိပြီးသား ဒုတိယ obs ကင်မရာကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများ၏ လက်ဆင့်ကမ်းမှုကို ရရှိနိုင်သည်။လူတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ ထိမိတယ်လို့ ဘယ်သူက ထင်မှာလဲ။အဲလို ဆန်းကြယ်တဲ့ :)
အားလုံးပြီးသွားပြီလို့ထင်ရပေမယ့် ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်းများသည် အချင်းချင်းကြားရမည်မဟုတ်ပါ၊ ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်- Voice meter VoiceMeeter နှင့် VoiceMeeter Virtual Cable ကဲ့သို့သော ပရိုဂရမ်များမပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်းများသည် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မကြားရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိုဂရမ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ၊ ၎င်းတို့ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါ- အသံဆက်တင်များသို့ ဆက်သွားပါ။အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်(စကားဝိုင်းတွင် အချိန်မရွေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စေရန်)အသံထိန်းချုပ်မှုဘောင်တွင် အသံသွင်းကိရိယာကိုဖွင့်ရန် မမေ့ပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက ဆက်တင်များပြီးသည်နှင့်ပင် အသံအလုပ်မလုပ်ပါ။
မိုက်ခရိုဖုန်းအတွက် Voicemeeter ပရိုဂရမ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်သည်- ပထမဘောင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို ထည့်ထားပြီး ဒုတိယတွင် A1 တွင် - A2 - KS ရှိ သင့်စပီကာ- VB-audio Point၊ ထိုအသံသည် သင်အပါအဝင် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူနှစ်ဦးစလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်သင့်ပါသည်။
သေးငယ်သည်- အထက်တွင်ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်၏အစစ်အမှန် webcam ကိုဖွင့်မည် သို့မဟုတ် အခြားအရာတစ်ခုခု၊ ဥပမာ၊ အော်ဟစ်သံ၊ လူအားလုံးသည် ပြင်းထန်သောစိတ်နှလုံးမရှိသောကြောင့် အော်ဟစ်သူများသတိထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သံသယမရှိသောသားကောင်များသည် ဤအရာသည် ဝိနည်းဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးဖြစ်သည်ကို သံသယမရှိစေရန်အတွက် မြင်ကွင်းကို သော့ပြောင်းခြင်းကိုလည်း သတ်မှတ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။
Android အတွက် Chatroulette
Chatrouletteသည် သူစိမ်းများနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် အွန်လိုင်းတွင် တွေ့ဆုံရန် အခမဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သည်။မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ သင်သည် interlocutor သို့ချက်ချင်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ဂိမ်းဟာ ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့ ရေပန်းစားလာပေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုကတော့ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ သဘာဝပါပဲ။နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အခါအားလျော်စွာ ထွက်သွားကြသော ရုရှားနိုင်ငံသားများနှင့် နေထိုင်သူများသည် ဝိညာဉ်ဖော်ကို ရှာဖွေရန် ဤနေရာသို့ အခါအားလျော်စွာ လာခဲ့ကြသောကြောင့် ချက်တင်ကစားသော လူပေါင်း 200,00,000 ကျော် နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး ကိန်းဂဏန်းများမှာ ဆက်လက်တိုးများလာသည်။
Android အတွက် Chatruletka သည် အများအားဖြင့် သင်လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဘယ်တော့မှ မဆုံဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လူများနှင့် အများအားဖြင့် အမည်မသိ ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ဤနည်းလမ်းသည် အသုံးပြုသူများကို မည်သည့်အရာမှ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေဘဲ မည်သည့်ဝတ္တရားများကိုမျှ ချမှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်အတွက်၊ လျှောက်လွှာအား တောင်းဆိုထားသောဒေတာအား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ဗီဒီယိုဝင်းဒိုးအောက်တွင် စာတိုချတ်တစ်ခုပါရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်သာမက စကားပြောဆိုသူနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။Windows ကို လဲလှယ်ပြီး အရွယ်အစားပြောင်းနိုင်သည်။
လူကြိုက်များသော Chatroulette ဝန်ဆောင်မှုသည် အမည်ဝှက်ကြောင့် အဆင်ပြေသည်၊ သင်ဆန္ဒရှိပါက နေထိုင်ရာနိုင်ငံနှင့် ရှာဖွေမှုဒေသကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။မည်သူမဆို chat တွင်လွတ်လပ်စွာခံစားနိုင်သည်။ဒီမှာအချိန်ဖြုန်းတာက အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်။
အသုံးပြုသူများ စိတ်ပါဝင်စားစေရန် သင်သည် တောက်ပသော ရုပ်ပုံတစ်ပုံကို ဖန်တီးနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ဝါသနာကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေရုံမျှမက၊ အချို့က အကများ စီစဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆူညံသော အွန်လိုင်းပွဲများကို နှစ်သက်သည်။
Android အတွက် Chatroulette သည် သင် အပန်းဖြေနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်၊ သင့်ဝိညာဉ်ဖော်ကို ရှာဖွေရန် သို့မဟုတ် စိတ်အဖော်ကိုပင် ရှာဖွေနိုင်သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။အပလီကေးရှင်းကို မိဘခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သို့မဟုတ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှတစ်ဆင့် ကလေးများကသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Chatruletkaကို ထည့်သွင်းရန်ဤအက်ပ် ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
ရုရှဘာသာဖြင့် ချက်တင် Roulette ကို Androidအတွက် အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။